Yaraynta waxyeelada iyada oo la raacayo cadaadiska sii kordhaya • Dawooyinka Inc.eu
6.Maandooriyeyaasha waa dambiile sida waafaqsan walaalaha "Guriga"
Netherlands - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talo Sharci) (@KHLA2014).
Jimcihii la soo dhaafay waxaan ka qeybgalay khudbad Steve Rolles oo ka socda Transform (Boqortooyada Midowday) ee ku saabsan nidaaminta daroogada ee madxafka soo-saarista daroogada, Poppi Amsterdam. Matxafka dawadan ayaa ah bilow Mu'asasada Mainline, oo ah urur u heellanaa in ka badan 25 sano sidii loo horumarin lahaa caafimaadka isticmaaleyaasha daroogada iyo shuruudaha ay ku nool yihiin iyagoo xaddidaya waxyeelada loo geysto isticmaaleyaasha maandooriyaha iyo deegaankooda, ama yareynta waxyeelada leh.
Yaraynta waxyeelada waxay ahayd tiir muhiim u ah siyaasada daweynta Nederland ilaa 80-meeyadii. Thanks to dareenka si yareynta waxyeelada Caafimaadka dadka isticmaala daroogada adag ee Nederland aad ayey u fiicnaadeen sannadihii ugu dambeeyay. Tayada noloshoodu way korodhay oo dhibkii yaraa ayaa yaraaday. Tirada cudurada faafa ee kooxdan sidoo kale hoos ayey u dhacday. Yaraynta waxyeelada waxaa ka mid ah barashada daroogada, isweydaarsiga sirinjirka, aagagga loo isticmaalo, qeybinta methadone iyo xarumaha baarista dawooyinka habeynka.
Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, Wasaaradda Arimaha Dibadda waxay taageertay mashaariic badan oo caalami ah oo ku saabsan la dhimeynta waxyeelada, taasina waa meesha Netherlands aad u sharaf waa la isticmaali karaa.
Aad ayaan uga xumahay, Waaxda Gobolka ayaa go'aansatey bishii Maajo ee sannadkan in la joojiyo maalgelinta mashaariicda caafimaad ee loogu talagalay dadka isticmaala maandooriyaha ama in ay gacan ka geystaan ​​dib-u-habeynta siyaasadaha caalamiga ee daaweynta. Mashaariicda HIV ee Bartamaha Aasiya, Bariga Dhexe iyo Koonfur-bari Aasiya gebi ahaanba waa la xiray. Jimcihii la soo dhaafay, Mainline Foundation waxay soo bandhigtay mid ka wakiil ah in kabadan 300 oo ururro caalami ah oo ka kala socda 85 dal warqad gubasho xubin ka tirsan baarlamaanka Mahir Alkaya (SP). Waraaqda dab-demiska, Wasiirka Ganacsiga iyo Iskaashiga Horumarinta Dibadda Sigrid Kaag (D66) waxaa loogu yeeray inay sii waddo maalgelinta mashaariicda yareynta dhibaatooyinka caalamiga ah. Waxaad filan lahayd in mawduucaani uu ku jiri doono liiska ugu sareeya oo leh wasiir D66, gaar ahaan ka dib markay xisbigeeda bilowgii sanadkaan yeelatay qormooyin aad looga wada hadlay oo loogu talagalay siyaasadaha daroogada ee dhabta ah. soo bandhigay ku baaqaya yareynta waxyeelada iyadoo aan la takoorin loona ciqaabin dadka daroogada isticmaala, laakiin iyada oo la kordhiyo lana wanaajiyo helitaanka iyo tayada macluumaadka iyo daryeelka iyo iskaashiga caalamiga ah.
Waxaan rajeynayaa in Goluhu u qaato warqaddan dab-demiska isla markaana ugu baaqayo wasiirka inuu sii wado fiiradaas, maxaa yeelay waxaa la soo bandhigay 40-kii sano ee la soo dhaafay in mashaariicda yareynta waxyeelada ay gacan ka geysaneyso yareynta qatarta isticmaale iyo deegaankiisa. Thanks to taageerada mashaariicdaas, Netherlands waxay awooddey inay badbaadiso kumanaan nafood, oo kaliya ma ahan waddankeena, laakiin sidoo kale dalal kale, sida Ruushka iyo Ciraaq.
Bulshada aan dawada lahayn
Kama baxsan karo aragtida ah in go'aanka ah in aan lagu maalgelin mashaariicda caafimaadka loogu talagay isticmaaleyaasha daroogada ama joojinta ku biirinta isbedelada siyaasadeed ee caalamiga ah ee wax ka beddelka ayaa wax walba ku qotoma aragtida la beddelay ee golaha wasiirrada ee maandooriyaha iyo isticmaaleyaasha maandooriyaha. Dawladdu waxay aqoonsan tahay muhiimadda siyaasad ku saleysan caddayn, laakiin sida ugu dhakhsaha badan markay timaado siyaasada daroogada, nooc nooc-wadareed ah ayaa ka dhacaya qolalka sare ee haweenka iyo siyaasiyiinta caanka ah.
Ka soo horjeedda go'aankeena wanaagsan, golahan wuxuu u halgamayaa mujtamac aan daroogada ka xorreyn. Hagaag, Mr. Grapperhaus iyo Mr. Blokhuis, waa bulsho ka madaxbanaan qiiq ayaa laga yaabaa in la ogaado 2040, laakiin bulshada ka madax-bannaan daroogada waa khayaali. Waxaa la joogaa waqtigii dood wanaagsan oo adag ay ka dhici laheyd mabaadi'da siyaasada daroogada Nederlaand iyo waxa aan dal ahaan u taaganahay. Sababta oo ah haddii ay dawladu ku dadaasho bulshada aan dawada lahayn, waxay aakhirka dhaawici doontaa ilaalinta caafimaadka bulshada.
go'aan qaadashodaroogadacaafimaadkadaroogada adagKHLANederlandsiyaasaddaqabatinkasharciga
Sababo la xiriira isbeddelada sharciyada iyo dib-u-fasirashada heerarka warshadaha, alaabada cusub iyo summadaha ayaa lagu daray is-kafaala qaadista.
Maxaad u isticmaali kartaa saliidda CBD?
Xogta taariikhiga ahi waxay muujinaysaa in cannabidiol, oo sidoo kale loo yaqaano CBD, loo isticmaali jiray hurdo hurdo ...
Mareykanka - Isgoysyada caalamiga ah ee COVID-19 ee dillaacay iyo shirkadaha marijuana ee Mareykanka…